Abe-AFASA bafukula umnotho wabamnyama ngezindali zezinkomo zabo – Sivubela intuthuko Newspaper
Abe-AFASA bafukula umnotho wabamnyama ngezindali zezinkomo zabo
UMNU Sihle Zikalala onguNdunankulu waKwaZulu-Natal ephahlwe nguNkk Bongi Sithole-Moloi onguNgqongqoshe wezoLimo nezeMvelo KwaZulu-Natal noMnu AJ Mthembu wesigqoko onguSihlalo we-AFASA KwaZulu-Natal. ISITHOMBE: TSEPO MOLEFE
IGCAGCELE esokeni kwabe-African Farmers Association in South Africa (AFASA) KwaZulu-Natal kufezeka iphupho labo lokuqala izindali zemfuyo lapho abalimi abamnyama ikakhulukazi abasakhasa benikezwe ithuba lokuhweba esidlangaleni ngemfuyo yabo.
Abe-AFASA basanda kuzwa amanzi ngobhoko ngokwenza indali yokuqala ngqa e-Ottos Bluff eMgungundlovu belekelelwa ngabe-Riley Auctioneers abebeqaphe ukuthi konke kuhamba kahle.
UMnu Mbongeni Sikhakhane oyiPhini likaNobhala we-AFASA KwaZulu-Natal utuse iqhaza loMnyango WezoLimo ngokuhlinzeka abalimi abamnyama ithuba lokungena kwezolimo. “Singabalimi abamnyama besishiywe ngaphandle kwezolimo. Namhlanje sibonga umnyango wezolimo ngokusibheka nathi wasinikeza ithuba lokuhweba ngemfuyo lokho obekwenziwa yizinhlanga ezithile zodwa. Ukuhweba ezindalini eziqondene nathi kuyasithobisa futhi sibheke ukuhamba ibanga elide nokuzimbandakanya ezindalini ezisungulwe ngabantu abamnyama,” kusho uMnu Sikhakhane.
UMnu AJ Mthembu onguSihlalo we-AFASA KwaZulu-Natal uthi beyinhlangano bafunde lukhulu ngeCOVID-19 njengoba nabo bengabalimi abamnyama bezibophezele ekuphakamiseni umnotho waseNingizimu Afrika. Uthe i-corona ishaye kwezwela endimeni yezolimo yingakho nabo behlele ukuthi le mfuyo abanayo ezibayeni bayifake endalini yabo ukuze umnotho wezwe nowabantu abamnyama ufukuleke. “Abantu abaningi abamnyama yibona abaphakamise umnotho wezwe ikakhulukazi kwezolimo. Siqaphelile ukuthi uma kunezindali zezinkomo ezenziwe ngezinye izinhlangano abantu abasuke bezohweba lapho ngezinkomo ngabantu abamnyama. Siyajabula ngoba uhulumeni wethu KwaZulu-Natal usisekile ngohlelo lwethu esiza nalo. Siyathemba ukuthi abantu bakithi nabo bazozuza lukhulu kuloluhlelo esiza nalo lokubafaka endimeni yokuhweba ngemfuyo yabo,” usho kanje.
Izindali zabe-AFASA zilandela umcimbi omkhulu owawungasekuqaleni kukaNhlangulana (June) nonyaka eCedara eMgungundlovu lapho babenikela kuhulumeni waKwaZulu-Natal ngezinkomo ezingu-25 okwakuhloswe ngazo ukulekelela abantu abakhahlamezwe yiCOVID-19 okwakulele ikati eziko emizini yabo ngesikhathi sokumiswa kokusebenza kwezwe. Lezi nkomo zamukelwa nguNdunankulu wesifundazwe uMnu Sihle Zikalala noNkk Bongi Sithole-Moloi ophathiswe uMnyango WezoLimo KwaZulu-Natal.
Inyembezi zesaguga ziphenduke injabulo